Modelling Chocolate Recipe (benzi-chiratidzo) + nyore dzidziso - Candy
Modeling chokoreti inogadzirwa kubva yakanyungudutswa chokoreti uye chibage manyuchi kuita inochinjika, inoumbika, inonaka ivhu
Maitiro ekugadzira benzi-chiratidzo modelling chokoreti! Kunyangwe zvihwitsi zvichinyunguduka, chena chokoreti, rima chokoreti kana iwe uchida kushandisa glucose pane chibage manyuchi. Tine zvese zviyero, mabikirwo, matipi uye matekinoro ekubudirira nguva dzese.
vanilla bundt keke recipe kubva pakutanga
Modelling chokoreti ndizvo zvaunoshuvira kutamba-doh zvakaravira senge iwe paunenge uri mwana. Yummy yekudya, iwe unogona kuchena chena yekufananidza chokoreti ine yakajairwa chikafu machira kana iwe unogona kushandisa yakasviba chokoreti kugadzira yakasviba mavara senge nhema.
Pandakatanga kunzwa nezve modelling chokoreti ndaive ndakanyanya kutya kuti ndimboyedza. Nechimwe chikonzero chokoreti inondityisidzira ini! Asi pandakangozviita, ndakashamisika kuti sei zvakanditorera nguva yakareba kuti ndiedze.
Chii chinonzi modelling chokoreti chinoshandiswa?
Modelling chokoreti yakanyanyisa kuita uye inoshandiswa kune zvakawanda zvinhu mumakeke ekushongedza indasitiri. Ini pachangu ndinoishandisa zvakanyanya kuveza zviso chaizvo nekuti zvinoshanda zvakanyanya sevhu. Iwe unogona kuivaka, kutsvedza mameseji uye inobata ruzivo chaizvo. Mushure mekunge kumeso kwavezwa ini ndinogona kubva ndawedzera kumeso kune a keke rebasa .
Modeling chokoreti zvakare yakanyatso kuita modelling manhamba ane, gadzira chokoreti maruva, uta kana runako zvakanyanya chero mhando yekushongedza. Vamwe vanhu vanotoishandisa kupake keke.
Heino vhidhiyo diki yandakaita makore mashoma kumashure ekushandisa modelling chokoreti pamusoro pechokoreti dehenya remuganda kuita chaiko kumeso.
Modelling chokoreti recipe
Iyi ndiyo modelling chokoreti recipe yandave ndichishandisa kwemakore. Inonyanya kuvimbwa uye nyore kuita nekuda kweiyo switi inonyungudika. Candy inonyungudika iri benzi-chiratidzo chokoreti. Iwe haufanire kuvatsamwisa uye ivo vari nyore kushanda navo.
Ini ndinonyungudutsa pasi zvihwitsi zvangu zvinonyungudika mu microwave. Ini ndinotanga nemineti imwe ndobva ndaenda mumasekonzi makumi matatu ekuwedzera ndichisimudzira pakati. Chokoreti chena inonyungudika ZVAKANAKA saka chenjera kuti unyunguduke mupfupika kana kuti uchazvipisa uye hapana kudzoka kubva ipapo.
Mushure mekunyungudutswa kweswiti yangu, ndinodziisa sirasi yangu yechibage kwemasekondi gumi nemashanu. Ingoita kuti zvive nyore zvishoma kudururira kunze kwemudziyo. Izvi zvinoitawo kuti zvive nyore kupinza muchokoreti nekuti kana sirafu yako yechibage iri kutonhora chaizvo, ichaita kuti chokoreti iyo inobata inyatsoomesa nekukurumidza kupfuura yakasara chokoreti kuti uwane mapundu.
Maitiro ekuwana yakatsetseka modelling chokoreti
Chakavanzika chekugadzira chaiyo modelling chokoreti haisi yekuwedzera-kumutsa. Iwe unoda kusanganisa kusvikira yako ese sosi yezviyo yabatanidzwa uye pasina iwo akanyorova mitsara asi mira nekukurumidza painotanga kubata kumusoro uye kuita kunge akapfava kushumira ice cream. Ukaramba uchikurudzira uchitarisira kuti zvinyanye kuoma, zvinopesana zvichaitika. Uchaona mamwe mafuta anotanga kubuda uye kupatsanurwa. Iyi ndiyo cocoa butter.
Chinhu chakanakisa kuita mune ino chiitiko kumisa kusanganisa, rega chinhu chitonhore pasi uye zvishoma nezvishoma chiise zvese kumashure pamwechete. Iwe ungatofanira kushambadza mumuviri mamwe mabhureti ecocoa bota pakupedzisira kuti riite rakatsetseka.
Kana chokoreti yave padanho rechando, enda kumberi woidururira pane kuputira kwepurasitiki uye rega i 'hafu yakatarwa'. Ichi ndicho chakavanzika chekuwana chaiyo modelling chokoreti nguva dzese. Ini ndinonyorovesa musanganiswa wangu pasi saka unonyatsogadzika zvakaenzana. Unogona kuiisa mufiriji kuti igadzike nekukurumidza kana kuti igare pakaunda.
Kana ichinge yasimbiswa zvakanyanya asi ichiri kusanduka, unogona kuikanya kusvikira yatsetseka. Ini ndinowanzo rega kuti igare kunyange yakatowanda kuti isimbe isati yashandisa.
Chinhu chekurangarira. Kana chokoreti yako YAKANYANYA kumisikidza ichava HARD. Iwe uchafunga kuti yakatsemuka zvachose uye iwe wakaikanganisa. Iwe hauna! Modelling chokoreti inogara yakaoma chaizvo kana yagara kweanopfuura maawa makumi maviri nemana. Ingoiisa mu microwave kwemasekondi gumi kuti unyorove uye uikanya kusvikira yanyatsonzwikwa zvakare.
Chii chinonzi reshiyo yechokoreti kune sosi yechibage yekufananidza chokoreti
Yeresipi iyi ini ndiri kushandisa ingangoita 4: 1 ratio inova yakapetwa kanokwana chokoreti sirasi yechibage. Izvi zvinoguma mune yakasimba yakasimba modelling chokoreti iyo ini yandinoda kune mazhinji mapurojekiti. Iwe uchafanirwa kugadzirisa yako reshiyo zvichienderana nerudzi rwechokoreti iwe yauri kushandisa.
Candy Melts - 4: 1 - 16 oz chokoreti - 3.5 oz chibage manyuchi
Chokoreti chena - 4: 1 - 16 oz chokoreti - 4 oz chibage manyuchi
Chokoreti yakasviba - 2: 1 - 16 oz chokoreti - 8 oz chibage manyuchi
Maitiro ekugadzira chokoreti yekuenzanisira zvakafanana
Sei kupenda modelling chokoreti?
Tenda kana kwete hapana chakakosha chikafu chevara chinodiwa kumuvara modelling chokoreti. Modelling chokoreti yatove nemvura mukati (chibage manyuchi) saka kuwedzera zvimwe hakukuvadze. Ini ndinofarira kushandisa artisan accents chikafu chevara nekuti chakanyanya kusimbiswa kana iwe unogona kushandisa yakajairwa gel chikafu mavara senge americolor.
Mazhinji echokoreti yangu yekuenzanisira anoguma ane ruvara rweganda. Kugadzira ruvara rweganda ini ndinoda iyo yenyanga yenzou yekudya kubva kuamericolor. Dzimwe nguva ini ndinowedzera mune imwe inodziya brown kana ndichida kuti ganda riite rakasviba. Ehezve iyo kara inosanganisa iyo kumusoro kune zvaunofarira.
Kune chaiwo akasviba mavara senge nhema, ini ndinokurudzira kukurudzira kutanga nerima chokoreti saka haufanire kuwedzera yakawanda ruvara kuti riite rakasviba. Ini ndinogara ndichirega chokoreti yangu ichizorora mushure mekuwedzera kara nekuti inogara iri nyoro chaizvo.
Unoshandisa sei modelling chokoreti?
Saka vanhu vazhinji vanorwira modelling chokoreti pakutanga nekuti ivo vanoda kuishandisa sekushandisa iwe fondant. Hazvina kufanana. Inotarisisa kupisa kwemaoko ako. Ini ndichaona vadzidzi mukirasi mangu vasina kufunga vachinyorovesa chokoreti mumaoko avo pavanenge vachifunga kwekuisa uye usati waziva, wawana mush.
Kune akawanda angu Bread makeke , Ini ndinoshandisa modelling chokoreti pamusoro pe yakasimba chokoreti dehenya muforoma kuita kuti kumeso kuve kwakarongeka nenzira. Chokoreti inoshanda zvakanyanya sevhu uye inonditendera kuti ndiwane mhedzisiro chaiyo senge mune yangu squid Contessa timelapse . Tarisa uone yangu dzidziso kuti ungaita sei kuveza kumeso pane dehenya rechokoreti.
Modelling chokoreti inoitirwa kuiswa pakeke uye yakanyoroveswa nechishandiso kana kuteedzerwa nekukurumidza pamusoro petafura. Mike McCarey anodaro mumakirasi ake ehunyanzvi, rega tafura ibate chokoreti iwe. Mazwi akachenjera nekuti kana iwe ukaedza kubata chokoreti iyoyo, unozopedzisira waita nyonganiso.
Ndinosarudza kushandisa chishandiso chevhu chevhu, chinodaidzwa kuti chishandiso changu chemashiripiti, kutsvagisa chokoreti. Inochengetedza minwe yangu kubva mukusviba uye maoko angu kubva mukuita kuti chokoreti inyanye kupisa.
Ndeupi musiyano uripo pakati pekufananidza chokoreti uye fondant?
Mumwe mubvunzo wandinowana wakawanda ndewekuti iwe unogona here kushandisa modelling chokoreti nenzira yaunoshandisa fondant. Mhinduro ndeye kinda. Iwe unogona zvirokwazvo kuita zvishoma zvidiki uye maakisi kubva mukuenzanisira chokoreti zvakanyanya senge nzira yaunoshandisa fondant asi haina kutambanuka sezvinoita fondant. Saka kana iwe uchida kuvhara keke rako mukuenzanisira chokoreti unofanirwa kuripanera.
Modelling chokoreti inodyiwa here?
Ok uyu unongova mubvunzo unoshamisa. Ichokwadi kuti inodyiwa! Uye zvinonaka chose! Zvakawanda zvinonaka kupfuura fondant kana iwe ukandibvunza.
Modeling chokoreti ndiyo imwe nzira yakanaka kune vanhu vasingade fondant.
Unogona kugadzira modelling chokoreti ine glucose?
Ini ndanzwa kuti iwe unogona kugadzira modelling chokoreti ine glucose zvakaenzana neyakaenzana sirasi yechibage asi unogona kuona kuti chokoreti yako yakanyanyisa kukakavara nekuti haina kunyatsofanana. Kana iwe ukaona kuti yako modelling chokoreti iri kumisikidza nekukurumidza kana yakasimba zvakanyanya, saka simudza yako recipe neounzi kusvika iwe wawana iko kusarongeka. Unogona kugara uchinyungudutsa, wedzera musirasi yangu uye rega itangezve. Hapana chikonzero chekurasa maitiro ako.
Kwokutenga modelling chokoreti
Ok saka chokwadi chinofanira kutaurwa, ini handina kugadzira yangu yekufananidzira chokoreti mumakore! Kwete kubva shamwari yangu Nathalie paakagadzira iyi inoshamisa modelling chokoreti inonzi Hot Hands. Iwe ungangodaro wakafungidzira, yakanyatso gadzirirwa kuti udzivirire kupisa kwemaoko ako. Iye anogara muSan Diego CA saka anoziva kupisa!
Pane imwe nguva ini ndashandisa iyi chokoreti inoshamisa mune imwe yemakirasi angu ndakanga ndakapindwa muropa! Ini zvino ndoshandisa maHot Hot chete nekuti irioooo yakatsetseka, yakasimba yakasimba uye yakanaka yekuveza uye kana uine maoko anopisa (seni) zvakatonaka. Kana iwe uri nhengo yechikoro changu chepamhepo Shuga Geek Ratidza ipapo iwe unowana yakasarudzika dhisikaundi zvakare.
Maitiro ekugadzirisa crumbly modelling chokoreti
Ok, saka ndanga ndichiwana yakawanda mibvunzo nezve modelling chokoreti kuoma uye kuoma zuva raunenge warigadzira. Modelling chokoreti HARD kana yagadzika. Ndicho chimwe chezvinhu zvakanaka nezvazvo! Saka kana iwe wakasiya yako modelling chokoreti kuti iome husiku humwe, zvinogona kunge zvakaoma zuva rinotevera. Chinhu chimwe chete kana iwe ukatenga modelling chokoreti.
Iwe unogara uchifanira kukanda yako modelling chokoreti usati waishandisa. Knead inenge 1 mukombe panguva. Zviri nyore nenzira iyoyo. Ndinoisa yangu mu microwave kwemasekonzi asingapfuuri gumi kuti ndidziye zvishoma. Kunyanya pazuva rinopisa. Pakutanga, zvinonyatso kupwanyika uye kuoma. Ingo ramba uchipwanya pamwe chete nemaoko ako, gadzira chero mapundu neminwe yako.
Ini ndichapwanya chaiyo chokoreti yekuenzanisira mutafura nechanza choruoko rwangu kuti ndigadzire mapundu uye ndiite iwo akatsetseka. Mushure memaminetsi mashoma, ichave yakatsetseka zvakare.
Unoda kuona kuti ungagadzira sei modelling chokoreti? Tarisa uone vhidhiyo yekare iyi kubva nakare asi ichiri kuita basa rakanaka rekuratidza matanho ekugadzira chokoreti chakakwana, chinokundikana-chemuenzaniso. Ndine urombo nezve mimhanzi isinganzwisisike. Ini ndanga ndichiri kudzidza lol.
Iyo modelling chokoreti recipe isina mapundu, inotapira uye nyore kushanda nayo. Inogona kugadzirwa kubva pahwitsi yakanyunguduka kana chokoreti chaicho. Inoshandiswa nezvakanaka. Gadzirira Nguva:5 mins Nguva Yakabika:25 mins Nguva Yese:3 hrs Makorori:5548kcal
White Modeling Chokoreti (kubva pamelties)
▢16 oz (454 g) machena machena anonyungudika
▢4 oz (113 g) chibage sirasi (kana glucose) Warmed for a few seconds kusvika pamusoro pekushisa kwemuviri
▢Vashoma madonhwe (Vashoma madonhwe) gel chikafu chevara Kana iwe uchironga nezvekupenda, kana zvisiri, siya kunze
Modelling Chokoreti (kubva chokoreti chaicho)
▢6 oz (170 g) chibage manyuchi
▢16 oz (454 g) chokoreti (chero mhando)
Sungunusa candy inyauka mupurasitiki kana microwave-yakachengeteka mbiya mu microwave kana chitofu-pamusoro sosi pani.
Warm chibage sirasi uye wedzera chikafu chekupenda. Rangarira kuti chako chekupedzisira chigadzirwa chichava chakareruka kupfuura icho chevara rako rezviyo. Iwe unogona zvakare kuwedzera ruvara gare gare kana iwe uchida.
Peta musanganiswa pamwe nespatula kusvikira musanganiswa watanga kubata uye wakaita senge nyoro shandisa ice cream.
Izvo zvakakosha kuti usapfuure-kusanganisa kana yako modelling chokoreti iwane oiri.
Putira mupurasitiki uye rega igadzike kusvikira chokoreti yasimba asi ichiri kutetereka. Kazhinji maawa mashoma zvinoenderana nekupisa kuri mumba mako.
Unwrap chokoreti uye kanya kusvikira wakatsetseka, uchipwanya chero mapundu akaoma neminwe yako.
Re-kuputira chokoreti uye wozodzosera mupurasitiki kuputira kuti umise kusvika zvaoma.
Chokoreti yako ichave yakaoma nguva dzese dzaunoshandisa uye uchafanirwa kuidziisa zvakare masekonzi mashoma (5-15 zvichienderana neyako microwave) usati washandisa. Usapisa-kupisa kana kuti inozopfava uye uchafanirwa kuimirira kuti iomese zvakare usati waishandisa.
Makorori:5548kcal(277%)|Carbohydrate:760g(253%)|Mapuroteni:44g(88%)|Mafuta:301g(463%)|Mafuta Akaguta:179g(895%)|Cholesterol:95mg(32%)|Sodium:656mg(27%)|Potassium:2612mg(75%)|Fiber:25g(100%)|Shuga:719g(799%)|Vhitamini A:135IU(3%)|Vhitamini C:2.3mg(3%)|Calcium:1049mg(105%)|Iron:13.6mg(76%)
maitiro ekugadzirira keke yefondant
ndeupi musiyano uripo pakati pekeke jena neyero
velvet tsvuku inonaka sei